Anuradhapura ~ Journey-Assist - Ny tena mahaliana any Sri Lanka
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Fampahavian'i Sri Lanka » Anuradhapura (Anuradhapura)
Fampahalalana ankapobeny momba Anuradhapura
Inona no hitranga amin'ny fitsidihana iray?
Ahoana ny fandehanana any Anuradhapur
Hotely any Anuradhapur
Weather in Anuradhapur androany
Fampahalalana mifandray. Ahoana no hahatongavana any
Anuradhapura (indraindray antsoina hoe Anura) dia tanàna any Sri Lanka, foibe ara-pitantanana any amin'ny faritany afovoany avaratra. 63 000 ny mponina.
Anuradhapura no renivohitra voalohany an'ny fanjakana Sinhala taloha izay nisy tao Sri Lanka taloha. Ny vohitra teto amin'ity toerana ity dia tamin'ny loharano an-tsoratra teo amin'ny Zavakanto faha-6. BC. f. Ny renivohitra amin'ity tanàna ity dia natao tamin'ny taona 377 A.K. f. Tamin'izany fotoana izany no nisy ny anarana hoe Anuradha ary tanàna lehibe tamin'izany fotoana izany. Na izany aza, ao amin'ny Andininy faha-9 nanafika ny renivohitry ny fanjakana Sinhala ireo mpanafika avy any India Atsimo. Taorian'izay dia lasa renivohitra vaovao i Polonnaruwa.
Ankehitriny Anuradhapura dia toerana malaza amin'ny fitsangatsanganana mpizahatany. Manan-danja lehibe ihany koa ilay tanàna amin'ireo mpivahiny bodista izay mitsidika azy matetika. Ny mpitsidika eto dia mety ho liana amin'ny tsangambato ara-tantara maro (na dia nidina tamina anay aza ny ankamaroany). Ny ankamaroan'izy ireo dia misy stupa miendrika lakolosy antsoina hoe dagobas. Betsaka koa ny sarivongana, lapa, trano ary fitahirizana artifisialy.
Ny zavatra mahasarika azy dia ny hazo Bodhi. Izy io dia iray amin'ireo tsangambato bodista manan-danja indrindra ary manintona olona marobe mpivahiny. Mitombo ao amin'ny tempolin'i Lancarma izy io. Araka ny angano, nipoitra avy amin'ny sampana hazo izy, ary ny Buddha no tonga saina.
Taloha sy Vaovao Anuradhapura
Anuradhapura dia mizara ho 2 faritra: antitra sy vaovao. Ny mponina manontolo ao an-tanàna dia mipetraka amin'ny ampahany vaovao aminy. Tafiditra ao anatin'ny tanàna vaovao ihany koa ny fotodrafitrasa rehetra, ao anatin'izany ny fitaterana an-tanàn-dehibe, fa ny ampahany taloha dia misy ivon-tarehy ihany.
Inona no hitranga amin'ny fitsidihana Anuradhapura. Maharitra hafiriana izany
Raha sendra voafetra ny fotoana manokana, azo atao ny mitsangantsangana amin'ny ozona ao anatin'ny iray andro. Izany no ataon'ny ankamaroan'ny mpizahatany, na mahaleo tena na mpandray anjara amin'ny fitsangatsanganana.
Roa andro eo ho eo no handinihana tsara ny mahasarika rehetra eto Anuradhapura. Na izany aza, ireo olona mandehandeha izay tsy fananana mpankafy ara-tantara ho an'ny takona ara-pivavahana dia ho sorena rehefa avy mitsidika tampon-trano telo na efatra mihetsika. Dia ho an'ny ankamaroan'ny mpitsidika dia ampy.
Ho toy ny toerana ahafahanao mandany ny fialan-tsasatr'i Sri Lankan iray manontolo, tsy manjary tanteraka ny Anuradhapura.
Amin'ny bisikileta na bisikileta manofa dia afaka mandinika ny tanàna taloha.
Azonao atao ny mijery ny lanonana tsara tarehy atao eo akaikin'ny hazo Bodhi masina taloha, izay ahitanao ny fananganana tempoly iray, izany no faharoa lehibe indrindra ao Sri Lanka.
Bodhi Tree any Anuradhapur
Inona no tokony hohenoinao ao Anuradhapur:
Fandrafetana ny monasitera Abhayagiri
Abhayagiri Stupa. Abhayagiriya stupa
Abkhayagiriya Monastery dia fitambaran-javatra feno fijery mahavariana. Ary i Dagoba Abhayagiri dia angamba ny habakabaka indrindra amin'ny stupa rehetra any Sri Lanka
Dagoba Ruvanvelisa (Ruvanvelisaya Dagoba)
Stupa Ruvanvelisa dia nanaiky ho toy ny dagoba tsara indrindra any Sri Lanka
Dagoba Tuparamaya no stupa voalohany naorina tany Sri Lanka. Izy no be voninahitra indrindra ao amin'ny nosy. Imbetsaka no rava sy naverina indray. Ny dikany ankehitriny dia namboarina indray tamin'ny 1862. Tsara homarihina fa io stupa io dia naseho tamina banky 50 rupee nanomboka tamin'ny 2001.
Stupa of Jetavanarama
Dagoba Jetavanarama no dagoba lehibe indrindra any Sri Lanka.
Tempolin'i Insurumuniya (Isurumuniya)
Isurumuniya Temple dia tempoly tokana namboarina manodidina ireo vato lehibe roa akaikin'ny Tassaveva Reservoir.
Niorina tamin'ny taonjato fahatelo talohan'i SM, ary be pitsiny izay ahitana tempolista bodista iray misy tsangambato Buddha mampahatsiaro, fampiononana ireo teny ary dobo nasiana vato. Ny tempoly dia marihina manokana amin'ny sary sokitra vato.
Ny mpikaroka dia nilaza fa tao amin'ity tempoly ity dia nanao fombafomba nahatonga orana.
Ny tempoly koa dia misy fanamaivanana malaza izay manome endrika ny zanaky ny King Dutugemunu sy ny malalany amin'ny fianakaviana tsotra. Izay nandao ny seza fiandrianana. Salia no anarany.
Fanamaivanana ny bas ao amin'ny tempolin'i Insurumunia
Mbola afaka mandeha any ianao Mihintale - Izany no iray amin'ireo toerana masina lehibe ao Sri Lanka, izay mirefy 12 km miala Anuradhapura.
Fotodrafitrasa ao Anuradhapur
Any Anuradhapur dia tsy misy afa-tsy fotodrafitrasa kely indrindra ho an'ny fizahan-tany, izay mahatonga ny fijanonana vetivety eto.
Mazava ho azy, tsy misy tora-pasika eto (satria lavitra ny ranomasina). Tsy misy fizahan-tany momba ny fizahantany, ao anatin'izany ny alina.
Na izany aza, vitsy ny trano fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny no misy.
Tsy misy ny faritra fizahan-tany misaraka.
Mikasika ireo mpizahatany, ny serivisy sakafo dia mifantoka indrindra amin'ny trano fisakafoanana hotely. Sarotra ny fitadiavana sakafo kely ao an-tanàna.
Ny hariva, any New Anuradhapur, tsy misy na aiza na aiza intsony, dia tsy nandeha na dia an-tongotra akory aza, afa-tsy ny fampandrenesana fandrarana amin'ny lalana eny an-dàlam-be.
Raha vao niditra ny haizina (21 ora teo ho eo) dia niditra tao anaty haizina sy natory ny faritra Anuradhapura.
Vidiny ao Anuradhapur
Azonao atao ny mividy tapakila tokana, ahafahanao mahita ny atinton'ny Abkhayagiri complexe. Ny vidiny dia 4500 rupees (25 dolara).
Ny fitsidihana ny ambiny (ny ankabeazan'ny) Anuradhapura taloha dia maimaim-poana, na izany aza dia tsy maintsy mandoa vola fanampiny ianao vao hiditra any amin'ny toerana manokana.
Safidy ara-toekarena (maimaimpoana) hitsidika ny Anuradhapura
Ny mpizahatany sasany tsy mividy tapakila tokana, mivezivezy manerana ny toerana misy tantara. Tsy miditra amin'ny faritanin'i Abkhayagiri complexe ny mpitsidika toy izany fa mitsangantsangana malalaka fotsiny.
Ity safidy ity dia mitombina, satria ny dagobas voaloa dia tsy mitovy amin'ny maimaimpoana, koa tena sahirana aorian'ny ampahatelon'izy ireo.
Fitaka any Anuradhapur
Misy mitera-doza eo noho ny lasa voina amin'ny fisolokiana.
Matetika, ny tuk-tukers dia manolotra mpizahatany haka azy manerana ny kompana iray, miantso ny vidiny mahazatra amin'ity toerana ity amin'ny $ 40 ka hatramin'ny $ 50 ary miaraka amin'izany koa dia manome toky fa hitondra izany any amin'ny faritra mandoa ny faritany maimaimpoana (azo heverina fa afaka mandamina izy ireo na efa nifanaraka tamin'ny mpiambina). Na izany aza, raha ny marina, ny kit-tuker toy izany dia hitondra anao any amin'ny toerana malalaka, mandalo azy ireo ho toy ny karama.
Fitsipika amin'ny fitafiana sy fitondran-tena ao Anuradhapur
Raha mitsidika haingon-trano bodista bodista dia tokony hitafy ny lohalika sy soroka ireo akanjo.
Zava-dehibe ny tsy manadino ny manala ny kiraronao izay ananan'ireo mponina eo an-toerana ny kirarony eo anoloan'ilay fidirana.
Misy trano fisakafoanana sy zava-pisotro any amin'ny faritra Anuradhapura taloha, tsy hisy olana amin'izany.
Fitaterana ao Anuradhapur. Mandondona, bisikileta, bisikileta na mandeha an-tongotra
Ny ampahany vaovao amin'ity tanàna ity dia mora mandehandeha tsy manao serivisy fitaterana entana. Na izany aza, tsy mitombina ny fitsidihana ilay tarika vaovao satria tsy misy na inona na inona ao. Na izany aza, ny ampahany taloha, izay misy ny atintona rehetra ao Anuradhapura, dia lehibe kokoa noho ny vaovao any amin'ny faritra.
Azonao atao ny manakarama mandondona mba hampihetsika azy io. Ny fandraisana azy mandritra ny andro ho an'ny fitsidihana fitsidihana dia mitentina salanisa ny vidiny 3600 rupee ($ 20)
Azonao atao koa ny manofa bisikileta na bisikileta.
Ao Anuradhapur, marobe ny toerana hofan-trano ho an'ireo fomba fitaterana ireo.
Ny fitsangatsanganana fohy amin'ny tuk-tuk, ohatra, raha te hahita hotely dia lafo Rupees 150-200 (manodidina ny 1 dolara)
Weather in Anuradhapur. Azo tanterahina sy lavitra an'izany!
Widget niova fo feno. Azonao atao ny manova ny sosona ho mety aminao (rivotra, orana, kotrokorana, rahona, sns). Ary eo am-pototry ny sarintany, azonao jerena ny toetr'andro toetr'andro ho an'ny Anuradhapur mandritra ny telo andro ho avy.
Fiantsonana fitateram-bahoaka anuradhapura
Misy fiara fitaterana mankany Anuradhapura saika misy tanàna lehibe any Sri Lanka. Lazao amin'ireo mpamily fiara mpitandrina Anuradhapura any amin'ny gara bus ary faly izy fa hampiseho aminao ny bus ilainao.
Anuradhapura. Fiantsonan'ny gara
Ny fifandraisana lalamby any Sri Lanka dia novolavolaina tsara, ary misy koa ny lalamby amin'ny Anuradhapur. mba hahazoana mandeha amin'ny lamasinina ianao. Ankoatr'izay, ny tontolon'ny lamasinina amin'ny lamasinina dia hisokatra mahafinaritra.
Inona no mampifangaro an'i Anuradhapura
Anuradhapura dia afaka ary tokony atambatra Mihintale, izay mety tsara 12km miala Anuradhapura. Raha mandeha amin'ny fitateranao ianao ary tsy mpivavaka be dia be, dia ampy ho anao ny fitsidihana iray amin'ny andro iray manontolo Mihintale.
Anuradhapura. Manondro ny sarintany
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https: //goo.gl/maps/Q7ehFTbqi5R85fRc6
Mazava ho azy, kely lafo kely dia mitsidika toerana atody any Sri Lanka. 25-30 dolara, raha misy vidiny.
Fa eto, eto Anuradhapur, tena misy dia be dia be malalaka izay ampy mba hameno ny hetaheta ny fahalalana :). Eny, ary tsy mitovy amin'ny karama, indrindra.
Misaotra an'ny mpanoratra nandinika tsara 😉